Glass Beads - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Glass Beads)
Porofo vita amin'ny ravin-damba roa vita tamin'ny labiera
Porofom-bozaka vita amin'ny ravin-damosina vita amin'ny labiera Ireo kofehy vita amin'ny hoditra manokana, amin'ny famokarana kofehy fitaratra, izay hanatsara ny toetran'ny fanamafisana ny fahamendrehana sy ny fanesorana ny labozia. Eny, Mety haharitra ny fihodinan'ny famokarana glasy ary...
Sla-brilliance Glass For Roadmarking Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara dia ambony kokoa noho ireo voamaina vita amin'ny glasy vita amin'ny fananganana lakolosy...
Perla Glass Glass Mba hanamorana ny faharetan'ny glasy vita amin'ny glasa ary hisorohana ny fialany amin'ny loko rehefa miparitaka amin'ny fiara, ireo kofehy ireo dia rakotra miaraka amin'ny lamosina manokana mandritra ny dingana famokarana mba hampitombo ny adhesion eo amin'ny gorodona sy ny...
Kitapo mivalona miresaka momba ny làlam-pifamoivoizana
Kitapo mivalona miresaka momba ny làlam-pifamoivoizana LASY FANASOAN'NY CHIYE Ny fitaratra fitaratra fanenon-damba no fomba mahazatra indrindra maneho ny fahazavana. Vola madinika vitsy an'arivony voarakitra ao anaty loko mifamoivoy no mahatonga azy hamiratra rehefa hitan'ny jiro ny fiara. Noho ny...
Kitapo fehiloha fanoratana ho an'ny famantarana famantarana Reflektor kely ho an'ny fahitana alina amin'ny marika famantarana Ny jiro fandokoana dia anisan'ny fitaovana ara-toekarena indrindra amin'ny fananganana toeram-piofanana azo antoka. Ny marika fampiasa amin'ny arabe ihany no ahitana...
1. Voalohany hisafidianana ny fitaovana, ny kalitaon'ny fitaovam-pitsaboana dia mamaritra ny kalitao vita amin'ny fitaratra vita amin'ny ho avy. Ny fitaovana maitso dia tokony hadio ary tsy misy fahalotoana, miaraka amina tanjaka sy fahasahiranana. 2. Taorian'ny fisafidianana ny fitaratra, ny manaraka...
BS6088A / B Kitapoanton'ny labozia
Sandblasting Glass Glass
Sandblasting Glass Glass Fampiasana : 1. Ho an'ny faritra afovoan'ny lasy, manala ny fihenjanana sy mampitombo ny herin'ny reraka, ary mampihena ny fahasosorana sy ny akanjo. 2. Ny sanding mandavo, loko, ankoatra ny fametrahana karbaona, ankoatra ny fanodinana ny marika. 3. Ny fitaovana tsy misy fefy vy...
Kitapo Glass ho an'ny Standard BS6088A
Glass Beads Gass Beads High Glass Beads Micro Glass Beads Premix Glass Beads Glass microbeads Endrika Glass Beads American Glass Beads